Uphume phambili owefilimu ekhombisa impi eyayiphakathi kwe-ANC ne-IFP | isiZulu
Uphume phambili owefilimu ekhombisa impi eyayiphakathi kwe-ANC ne-IFP
Durban - UMazwi Xaba uhlonishwe ngendondo ekhethekile emcimbini amaSimon Mabhunu Sabela Awards ngoMgqibelo.
Lezi zindondo zinikezwa labo abaletha ushintsho embonini yezamafilimu njengoba eqanjwe ngalowo owayengumbhali nomhleli wamafilimu, uSabela, owaba ngumdidiyeli wamafilimu wokuqala onsundu.
Lo mcimbi uqhakambisa imisebenzi emihle yabadidiyeli bamafilimu esifundazweni iKwaZulu-Natal kanti kulo nyaka kuklonyeliswe uXaba odabuka eWillowfontein ngefilimu yakhe ethi Scars of Seven Days.
UXaba uthi ifilimu yakhe igxile empini eyenzeka phakathi kwe-ANC kanye ne-IFP endaweni yaseMgungundlovu eyathatha izinsuku eziyisikhombisa kuphela kodwa yashiya abantu abalinganiselwa kwabangu-80 beshonile kwasala nezinkulungwane zingenawo amakhaya.
OLUNYE UDABA:Owine indondo kuma-PSL Awards useyokwenza inhlolokhono phesheya
Uhulumeni wakulesi sifundazwe ukhuthaze abadidiyeli bamafilimu ukuba babhale ngomlando wezindawo zasemakhaya nasemalokishini.
Enye intokazi ethole indondo ekhethekile nguXolisile Mhlongo waseNewtown A, eNanda, oklonyeliswe ngeyeBest use of KZN location ngokuveza imijondolo yaseBhambayi eseNanda kwifilimu ethi, Imbali kaBaba.
Ezibongela ngale ndondo, uMhlongo uthe: “Le ndondo itshengisa ukuthi siwenze kahle umsebenzi wethu wokubonakalisa imijondolo nokuyindawo engavamile ukuvezwa kahle emafilimini. Abantu abaningi abathandi ukuveza noma ukusebenzela kulezi zindawo ngoba baphila kuzo nsukuzonke.”
Uthi uyabonga ngoba le ndondo ayitholile izokhuthaza abantu besifazane ibatshengise ukuthi nabo bangakwazi ukwenza umsebenzi ofanayo nabesilisa.